Tsy Handefitra Zavatra Hafa Ankoatry Ny Fiderana Ny Fampisehoany Ny Matson’ny Ady Lehibe Faha-II. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2015 9:10 GMT
Matso miaramila ataon'i Xi irery. Sary Vilana avy amin'ny Pejy Facebook WikLeaks amin'ny teny Shinoa
Mba hankalazàna ny faha-70 taonan'ny faran'ny Ady Lehibe faha-II, nasai'i Shina ireo mpitondra manerana izao tontolo izao, avy ao Afrika, Azia Afovoany ary Eoropa Atsinanana mba handray anjara amin'ny matso lehibe natao ny 3 Septambra. Navoaka tamin'ny 24 Aogositra ny lisitr'ireo vahiny nasaina.
Mafana ny fikorontanan'ny fiainana andavanandron'ny olona sy ny tsy fahatongavan'ireo mpitondra avy ao Eoropa Atsinanana, ankoatr'ireo endrika hafa tamin'ny matso, saingy lohahevitra voasivana ireo tao amin'ny media sosialin'i Shina.
Io no fotoana voalohany izay nikarakaran'ny Antoko Kaominista Shinoa (CCP) matso iray hankalazàna ny fiafaran'ny Ady Lehibe Faha-II. Roa taona nialoha ny Ady Lehibe Faharoa no nanomboka ny fandraisan'i Shina anjara tamin'ny fipoahan'ny ady tany Eoropa, raha nanafika an'i Shina i Japana, nandrehitra ny afo teo amin'ny ady lehibe Faharoa an'i Shina-Japana. Taorian'izay Japana, ny taona 1941, izay niara-da tamin'i Alemaina sy Italia, nandaroka baomba ny tobin'ny tafika an-dranomasina tao Pearl Harbor – Etazonia, nanjary ady goavana tao anatin'ilay fifandonana midadasika be ny adin'i Shina-Japana.
Satria ireo ezaka tamin'ny ady nataon'ny mpanohitra an'i Japana notarihan'ny antoko politika Kuomintang tao amin'ilay Repoblika vaovaon'i Shina (Taiwan), maro tamin'ny media sosialin'ny Shina no nanontany raha toa ny CCP hila dera tamin'ny fandresena nandritra ny ady nifanaovan'i Shina-Japana.
Saingy naniry mafy ny Filoha Sinoa Xi Jinping hampiranty ny “andraikitra goavana” notànan'ny fandraisan'ny CCP anjara nandritra ny Adin'i Shina-Japana satria manana ny dikany ho an'ny fahaterahana vaovao ho an'i Shina ilay fandresena, tetikasa fitiavan-tanindrazana naelin'i Xi hatramin'ny nanomboka naka ny fitarihana. Mandray vilana ny matso tahaho toy ny seho tokana nolalaovin'i Xi ny olona sasany, araka ny asehon'ny sary ery an-tampon'ity lahatsoratra ity ary koa ny lahatsarin'i Patrick Boehler ao amin'ny Twitter:
Ity no fomba fanehoana ny sasany ny esoeson'ny olona ao Shina tamin'ny matson'ny miaramilan'i Xi tamin'ny 3 septambra
Cheng Ming, mpaneho hevitra ara-politika monina any Etazonia aza, niantso ny ezak'i Xi ho “mahamenatra” :
Lazain'ny sasany fa ezaka hampitahorana an'i Japana sy hanerena an'i Abe [Praiminisitra Japoney] mba hanaiky ny fahambonian'i Shina ao Azia ny matso nataon'ny miaramilan'i Xi; ny sasany milaza fa te hampiseho amin'izao tontolo izao i Xi fa ambany fifehezany ny hery ara-tafika. Ho ahy, ampiasain'i Xi ny matso mba handaingana amin'ny vahoakan'i Shina sy izao tontolo izao, indrindra indrindra ny tanora ao Shina, fa ny fandresena tamin'ny adin'i Shina-Japana dia notarihan'ny CCP. […] Koa satria manakaiky ny 3 septambra, manodidina ny matson'ny miaramila avokoa ny dokambarotra amin'ny media. Mandray anjara amin'ny fifaninanana mandainga ireo manampahaizana ao amin'ny antokony mba hanaporofoana fa nitàna “andraikitra goavana” tamin'ny Ady fanoherana an'i Japana teo ambany toro-marik'i Xi ny CCP.
Mazava loatra, ny matson'ny miaramila dia lavitra ny ara-bakiteny hoe sehon'olon-tokana satria filoham-pirenena 30, indrindra avy ao Afrika, Azia Afovoany ary Eoropa Atsinanana no hanatrika. Mba hahazoana antoka fa hanaraka izay voasoratra ny zavatra rehetra, nanamafy ny vahohony ivelany sy anatin'ny aterineto ireo tomponandraikitra. Mandritra ny famerenana matso ny faran'ny herinandro, nikatona avokoa ireo arabe lehibe, ny fitateram-bahoaka ary ireo fivarotana sasany. Nitatitra tamin'ny Twitter ireo mpampiasa Twitter sasany teny an-kianja:
Faha-2 amin'ny fihodinan'ny fiara tsy nahitàna fiara tao #beijing androany noho ireo famerenana ny matson'ny miaramila hatao ny 3 Septambra ho avy izao
Nivoaka mba hividy legioma vitsivitsy teo ambany aloky ny lanitra manga nomanina ho an'ny matso marainan'ny miaramila. Mba falifaly aho teo, saingy avy eo, efa nangorona entana ny toerana fivarotanana anana. Ny 5 Septambra vao hiverina hivarotra indray. Mpivarotra sakafo maraina, toerana fihinanana akoho sy ny trano fisotroana kafe ankafiziko, nihidy avokoa.
Naneho hasosorana tamin'ny fandaminana ny maro, saingy tena vitsy no sahy miresaka manohitra ny zavabitan'ny fanjakana. Navoaka ny toromarika fanivànana faran'izay henjana ho an'ireo mpampita vaovao mba hahazoana antoka fa:
ireo vaovao rehetra sy ireo fanehoan-kevitra mifandraika amin'ny matson'ny miaramila dia tsy maintsy jerena am-pitandremana fatratra vao alefa mba ho antoka fa mandoka sy tsy hanohitra ny [Tafi-Panafahan'ny Vahoaka] na ny matson'ny miaramila; fa tsy hanohitra ny Antoko izy ireo, ny [Repoblika Entim-Bahoakan'i Shina], na ny rafitra politika; ary tsy hanohitra ireo mpitondra ny firenena.
Hay tsy ireo fanehoan-kevitra mitsikera irery ihany fa koa ireo vaovao manaratsy no voasivana. Nosakanan’ireo tompon'andraikitra ireo media mitatitra mikasika ny fianjeran'ny angidimby an'ny tafika, izay nomanina ho amin'ny matso tamin'ny 16 Aogositra. Fepetra maro no hampidirina mba hamerana ny fiparitahan'ny vaovao ao anatin'ny andro vitsivitsy ho avy, araka ny voalazan'i Astrill, mpamokatra VPN iray, ho sembatsembanin'io ny asany mandra-pifaran'ny matso:
Noho ny fisian'ny matson'ny miaramilan'i Beijing amin'ny herinandro ho avy iny, niharan'ny famoretan'i Shina ny IPSec VPNs mampiasa ny teknika mamaky GFW. Mety ho voafetra ny fahazoana miditra VPN avy amin'ny fitaovana iOS amin'io fotoana io.
Hatramin'ny fiafaran'ny matso, tsy ho azo ampiasaina amin'ireo fampiharana iOS ny sasany amin'ireo lohamilina.
Mandehandeha manerana ny media sosialin'i Shina ny sary maneho ny matson'ny miaramilan'i Hitler, tany am-piandohan'ny volana Aogositra mba ho fanehoan-kevitra tsy takatry ny saina mikasika ny matson'i Shina atsy ho atsy.
Na dia eo aza ireo fepetran'ny fanivanana henjana, mipoitra indraindray eny ihany ireo fanehoankevitra manesoeso sy ireo sary, saingy tsy ela dia manjavona . Ohatra, mikasika ny fasisma:
Hoy izy ireo, toa handeha amin'ny fampiantranoana matson'ny miaramila mpanohitra fasista ny firenena fasista iray
Taorian'ny namoahana ny lisitry ny vahiny, nipoitra ireo fanamarihana manesoeso, ary vetivety ihany dia manjavona, tao anatin'ny faritra natao ho an'ny tohivakan'ny fanehoankevitra. Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo fanehoankevitra mikasika ny lisitry ny vahinin'ny matson'i Shina nosintonina avy amin'ny Free Weibo, tetikasa iray natokana hanavotana ireo votoaty voasivana avy ao amin'ny Weibo, sehatra fitorahana bilaogy kiritika ao Shina:
Ny volana Martsa, nandoa vola fanampiana 30 tapitrisa dolara [ i Shina]. Io no fandaniana ho an'ilay fisehosehoana. Tsy maintsy manorina firenena iray ao Afrika aho mba hahazoana vola.
Hanatrika ny matso ataon'ny miaramilan'i Shina ny Repoblikan'i Vanuatu ao amin'ny Ranomasimbe Pasifika. Firenena nitsangana tamin'ny taona 1982, misy mponina 200.000. Noderain'izao tontolo izao ho sahala amin'ny firenena sambatra indrindra izy. Firenena tsy nisy nifandraisany tamin'ny ady nanoherana ny fasista. Tonga tany Beijing mba hitsangantsangana hijery ny manodidina fotsiny izy ireo.
Tena vitsy namana ny olona iray tsy misy foto-kevitra ijoroana. Ireo mpitondra fanjakana niseho nanatrika tamin'ny volana Septambra ny matson'ny miaramila, dia ireo vitsivitsy velom-pitserana – Firaisana Sovietika teo aloha, ireo kaominista mpiara-dia fahiny tao Azia atsimo, ireo hany sisa fanjakana kaominista, rahalahy Afrikana ary ireo vitsivitsy ao Azia. Ny sasany mety ho novidiana mba hiseho.
Miomana fatratra amin'ny ho fanaovana tatitra isankarazany avy amin'ilay matson'ny tafika ireo media eo ambany fanarahamason'ny fanjakàna. Araka ny anatonan'ilay fampisehoana, toa safidy roa no ananan'ny vahoaka Shinoa: midera imasom-bahoaka an'ilay matso na mitàna fahanginana.